Fikradda ah in lagu casriyeeyo qalab cusub waxaa racfaan ilaa aad bilowdo ogaaday xaqiiqda ah in aad xogta qaali ah ayaa weli ku nool dalka qalab waaweyn, iyo waxa ay ahaan laheyd xanuun dhab ah qoorta si ay u wareejiso aad telefoon cusub.
Ayaa kumanaan fariimaha, files iyo fayl sameeyo qalab ka weyn sanduuq khasnad dalwaddii. Marka bedesheen ka mid qalab Android in kale, si ay telefoonka cusub wareejinta xogta aad waa u fududahay. Si kastaba ha ahaatee marka aad doonayso inaad ugu bedesho boosteejo ah oo kala duwan sida qalab macruufka ah, hanaanka wareejinta xogta noqdo duwantahay.
Waxaad u hagaagsan karo xiriirada aad u qalab cusub Google nidaameed, iyo xataa Lugood kaa caawin kara inaad soo qaar ka mid ah macluumaadka jir si aad u qalab macruufka cusub. Si kastaba ha ahaatee wareejinta dhammaan macluumaadka kale sida farriimaha, sawiro, abuse wac iwm weli hawl aad u dhib. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee in aad la kulmi kartid iyadoo isku dayaysa inay xog ka Samsung wareejiyo qalab kasta oo macruufka ka mid ah:
• Shakhsi ahaan u dhaqaaqin folder kasta sida Messages, Xiriirada, Photos iyo files warbaahinta kale gacanta noqon kartaa daal.
• Geedi socodka dheer u baahan tahay in aad marka hore lagu wareejiyo xogta ka qalab Samsung in PC ka dibna ka PC aad qalab macruufka ah. Tani waa waqti lumis.
• Waxa lagaa rabaa inaad si loo soo dajiyo ah codsiyada dhinac saddexaad sida Transfer File Android halka macluumaadka wareejinta oo ka qalab Samsung in macruufka via Mac PC.
• Waxa loo baahan yahay in aad si loo soo dajiyo music app geeyo ah oo ku saabsan qalab macruufka si ay u awoodaan si ay u gudbiyaan files music ka qalab Samsung.
• Wixii files kale sida waraaqaha, pages iyo keynotes, waa in aad sidoo kale soo dajiyo app gaar ah ama ka sameysataa xisaab iCloud ah oo ku saabsan qalab macruufka ah, ka dibna maraan hawsha foosha xun ee ugu horeysay in aad xisaabta iCloud wareejinta faylasha aad ka phone Samsung , ka dibna soo degsado files kuwa si aad qalab macruufka ah.
Xogta Suuqa ka Samsung in Device macruufka - In One Click
Waxaad naftaada ku badbaadin karto ka kaaftoomi ee gacanta wareejinta xogta ka qalab Samsung in macruufka soo degsado codsi ah in ka dhigaysa nidaamka oo dhan ee ilmaha ku ciyaaraan. Mid ka mid ah codsiyada ugu fiican waayo, kanu waa Wondershare MobileTrans in aad u saamaxaaya in ay ku dhawaad ​​qaadaan dhammaan xogta la kaydiyaa qalab Samsung ka badan si ay u qalab macruufka ah effortlessly. Version A free of software ah ayaa diyaar u ah si aad isugu daydo. Inkastoo version maxkamadda uu leeyahay muuqaalada xadidan oo xayiraad marka la barbar dhigo version bixisay buuxa, weli waxaad ka heli kartaa fikradda sida app u shaqeeyo.
Inta aad isticmaali kartaa PC ah sida a go-u dhexeeya, Wondershare MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xogta iyo macluumaadka kale ee si fudud u dhexeeya laba Qalabka telefoonada gacanta socda nidaamyada hawlgalka ka dhufto ee kala duwan.
Si aad u isticmaasho Wondershare MobileTrans in ay xogta ka Samsung qalab qalab macruufka wareejiyo:
Wondershare Ayaa sameeyay caado wanaagsan oo ah in la sii daayo korontada iyo telefoonka gacanta ku ool ah oo user-friendly in ay yihiin. Taasi lagu sheegay, interface ka nidaamsan oo fududeeyey in Wondershare MobileTrans ayaa si cad u soo bandhigay ilaha iyo caga qalabka ku xiran yihiin PC labadaba. Codsiga aad Socon dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah in aad u baahan tahay in aad qaadato halka wareejinta xogta aad. Waxaad sidoo kale u guuraan kartaa ku dhowaad dhammaan xogta guud ahaan qalabka dhabarkaaga ilaa xogta si aad u your computer, waa in aad weligaa u baahan tahay in la soo celiyo.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi codsiga aad PC:
2. Ka dib markii ay soo degsado, rakibi codsiga.
3. Marka lagu rakibay, barnaamijka la bilaabay aad kombuutarka by double-gujinaya ay icon.
4. interface furay, guji Phone in ay button Transfer Phone inuu ku soo bilowdo diyaarinaya hanaanka wareejinta xogta.
Fiiro gaar ah : Haddii aadan haysan Lugood horay aad kombuutarka, MobileTrans soo bandhigay suuqa kala gooni ah aad keentay si loo soo dajiyo mid. Waxaa muhiim ah in aad soo dajiyo Lugood hor inta aanad bilaabin dhexeeya qalabka aad wareejinta xogta.
Tallaabada 2. Connect labada qalabka si aad PC:
1. Isticmaalka fiilooyinka USB ah, xirmaan labadaba qalabka Samsung iyo macruufka in PC caadi ah.
2. Marka xiran, riix Flip button meeleeyo u dhexeeya labada qaybood si ay ula qabsadaan il iyo caga qalabka.
Fiiro gaar ah : Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad tan sameyso haddii il iyo caga qalabka waxaa lagu soo bandhigaa hoos khaldan qaybaha.
3. Optionally, ka fiiri macluumaadka oo cad ka hor inta nuqul checkbox ka hoose ee ku meel loo ahaadana iyadaa qaybta haddii aad rabto in aad tirtirto xogta in in waxa lagu kaydiyaa aad u socoto qalab macruufka ah.
Tallaabada 3. xog Transfer ee click hal:
1. In ay bilaabaan in xogta aad, dooro files in aad rabto in aad ku wareejin ka Select content in aad nuqulka sanduuqa kaalinta dhexeeya qaybaha Source iyo meel loo ahaadana iyadaa.
2. Marka sameeyo, riix Start Copy button.
3. Sug ilaa barnaamijka ku wareejinaya xogta ka phone Samsung u qalab macruufka cusub.
4. Marka hanaanka wareejinta si guul ah u dhameystiray, riix OK on box pop-up muuqata ka.
Fiiro gaar ah : Waxaad carqalad ku keeni karaan hanaanka wareejinta mar kasta adigoo riixaya Cancel button rukun-midigta hoose ee suuqa kala ah.
Fiiro gaar ah : Hubi in labada qalabka yihiin kuwo si fiican ugu xiran oo dhan habka wareejinta.
> Resource > macruufka > Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung in macruufka Devices